မြ၀တီ - တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi bin Baharim အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Thursday, 12 July 2018 17:05 font size decrease font size increase font size
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် - ၁၂
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ H.E. Mr. Zahairi bin Baharimအား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး နှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. Abdul Razak Haron နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီး ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု အန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးတွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှုများအား ပူးပေါင်း နှိမ်နင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်အလိုက် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေး၊ အားကစား အဖွဲ့များ အပြန်အလှန် စေလွှတ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စစ်ဘက်ဆေးပညာများ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Read 553 times Last modified on Thursday, 12 July 2018 17:16
More in this category: « တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ FIFA World Cup Russia-2018 ဗိုလ်လုပွဲ တိုက်ရိုက် (Live) ထုတ်လွှင့်မည် »